Mayelana NATHI - Shenzhen Vangu Technology Co., Ltd.
I-VANGU inikeza isipiliyoni sokuqala kakhulu kodwa esithuthukile se-vaping.
VI-ANGU tech ibilokhu ikhiqiza imishini esezingeni eliphakeme ye-vape selokhu kwasungulwa ifektri yayo ngo-2014. Ifektri isidlulile i-FCC, i-CE, i-ISO9001 ne-Rosh certification. Ihlale igcina izindinganiso eziphakeme futhi iwina ama-oda amaningi kumakhasimende e-OEM.
Sikholelwa ngokuqinile kumodeli yokubambisana yokuwina-win. I-VANGU tech manje ingumkhiqizo womhlaba wonke, imikhiqizo ye-vangu manje isatshalaliswa yinkampani yethu emhlabeni. I-VANGU inikeza isipiliyoni sokuqala kakhulu kodwa esithuthukile se-vaping.
OInethiwekhi yokusabalalisa yomhlaba yenza i-VANGU ifinyeleleke emhlabeni jikelele. I-VANGU tech asset eyinhloko yithimba lethu locwaningo nentuthuko elishayela izinto ezintsha. Ngakho-ke, noma ngabe imikhiqizo yethu ye-vape mikhulu kangakanani, ngeke saneliswe ngekhathalogi yethu yomkhiqizo.
Siyaqhubeka nokwenza ngcono futhi sihlole isikhunta esisha nama-pods futhi siqhubeke nokuthatha impendulo yamakhasimende ngokungathi sína. Sihambisana nenqubekela phambili, senza lula ukukhiqizwa nokunikezwa kwempahla ukukhuthaza ngokushesha imikhiqizo ephuthuke kakhulu kunazo zonke emphakathini wamazwe omhlaba.
Sicela wamukelwe ukujoyina inethiwekhi yethu ye-vangu vangu yomhlaba bese ugcwalisa ifomu le-wholesale.